Thursday June 03, 2021 - 22:47:19 in Wararka by Xarunta Dhexe
(BBC) Baadariga Kaniisada Orthodox-ka ee Itoobiya ayaa kiciyey dood la isku ismaandhaafay markii uu sheegay in xasuuq laga wado waqooyiga gobolka Tigray.
Abune Matthias - oo asal ahaan kasoo jeeda qowmiyada Tigrayan - wuxuu sharraxaad ka bixiyay tan iyo markii uu qarxay iskahorimaadka bishii Nofeembar ee udhaxeeyey militariga Itoobiya iyo Jabhadda Xoreynta Dadka ee Tigreega (TPLF), in "afkiisa la xdhray, oo uusan hadli karin cabsi darteed".
Hadalka qiirada leh ee Abune Matthias wuxuu layaab ku noqday dad badan oo u dhashay qoomiyadda Tigreega, kuwaa oo si qoto dheer uga naxay rabshadaha ka socda gobolkooda. In ka badan laba milyan oo qof ayaa ku barokacay iskahorimaadkaas.
Mudaaharaadyo ka dhacay caasimadaha adduunka iyo baraha bulshada, xubnaha qurbajoogtu waxay ku midoobeen olole ka dhan ah waxa ay ku adkaysanayaan inuu yahay xasuuq.
Dowladda Itoobiya waxay diidday warbixinnada ku saabsan xasuuqyada baaxadda leh ee la buunbuuniyay iyagoo ku tilmaama arrimo siyaasadeed.
Ereybixin ahaan, xasuuqu waa dambiga ugu daran dambiyada - kan ugu xun buugaagta sharciga. Waxay kicinaysaa cadho gaar ah - kuwa u ololeeya ka hortagga xasuuqa waxay ku baaqayaan jawaabo caalami ah oo ay kujirto faragelinta millatari, si loo joojiyo.
Kumannaan qof ayaa lagu dilay Tigray
Ereygan waxaa alifay Rafael Lemkin, oo ah garyaqaan reer Polandn ah asal ahaanna yuhuud ah, si uu u sharaxo dambiyada gaarka ah ee foosha xun ee ay naasiyiintu u gaysteen bulsho dhan.
Waxa uu ku guuleysatay meel gaar ah buugaagta qawaaniinta caalamiga ah, markii Qaramada Midoobay ay dejisay Heshiiskii Xasuuqa ee 1948.
Hadalka Nacaybka ah
Maxkamadeyntii saraakiishii sar sare ee Nazi ee Nuremberg, dacwad oogayaashu waxay keeneen eedeymo dambiyo ka dhan ah aadanaha - oo lagu qeexay xadgudubyo baahsan oo nidaamsan oo ay geysteen dowlad ama hay'ad u eg.
Xasuuqu waa nooc kale oo dambi ah, oo lagu qeexay ujeedka dambiilaha: "inuu burburiyo, gebi ahaan ama qayb ahaan, koox, qaran, qowmiyadeed, midab ama diin, sida oo kale."
Ilaa iyo hadda, ururrada xuquuqul insaanka ayaa sheegay in laga yaabo in dambiyo ka dhan ah aadanaha ay ka dhaceen Tigray. Taas oo suuagal ah in ay isbeddesho.
Qaar ka mid ah warbaahinta Itoobiya waxay muujiyeen cadaawad qowmiyadeed oo ay u qabaan Tigreega, iyaga oo luuqad sharaf dhac ah loo adeegsaday si aan kala sooc lahaynna loogu dhaleeceeyay dhammaan qoomiyadda Tigreega, gaar ahaan qaladaadkii lagu eedeeyay kooxda TPLF, taas oo xukunka haysay heer federal in kabadan 25 sano oo khilaaf qadhaadhna uu kala dhaxeeyay Ra'iisal wasaare Abiy Axmed kadib markii uu xafiiska la wareegay 2018. Taas oo markii danbe ku danbaysay isku dhacii dhacay.
Erayada bani'aadamnimada ka baxsan sida "dhurwaaga maalinlaha ah" iyo "kuwa kale oo aan la aqoon" ayaa loo isticmaalaa si loo soo abuuro nacayb.
Muddaharaaddo ka dhacy dunida oo dhan oo ku saabsan Tigray
Waxaa jira warbixino sheegaya in qowmiyadaha Tigreega laga sifeeyo shaqooyinka dowlada iyo ciidanka, iyo xayiraad safarkooda, meheradahooda iyo guryahooda ah.
Waxaa sidoo kale jira warbixino badan oo sheegaya dilal wadareed ka dhacay Tigray, dhinac walba.
Go'aanka kama dambaysta ah ee haddii ay tahay xasuuq wuxuu noqon doonaa xukun dambiyeed ay qaado maxkamad heer sare ah - si gaar ah Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC).
Laakiin si ay ICC u qaaddo kiiskan waxay u baahan tahay go'aan ka soo baxa Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, taas oo aan aad u macquul ahayn marka loo eego tuhunka Afrikaanka ee maxkamadda iyo diidmada Shiinaha iyo Ruushka.
Hoggaamiye hore oo Itoobbiyaan oo lagu xukumay Xasuuq
Tigray waxaa burburiyey khilaafka.
UN, US iyo UK dhamaantood waxay ka digeen todobaadkan macaluul baaxad weyn oo ku soo fool leh Tigray. Xaaladda cakiran ayaa taagan oo ay ka mid yihiin dhac, barakicin qasab ah, burburinta cuntada, biyaha iyo xarumaha caafimaadka, kufsi baahsan oo ka horjoogsanaya dadka ka badbaaday inay daryeelaan naftooda iyo carruurtooda, iyo xannibaadda gargaarka bani'aadamnimada.
Soddon sano ka hor, markii Itoobiya ay sameysay Xafiiska Xeer Ilaalinta Gaarka ah si ay u maxkamadeyso saraakiishii xukunkii militariga ee xukunka laga tuuray ee Mengistu Haile Mariam, waxaa la go'aansaday in loo adeegsado eedeymaha xasuuqa dil siyaasadeed.
Muhiimadda ugu weyni waxay ahayd "Argaggixisada Cas" ee 1977-78 markii maamulku dilay tobanaan kun oo dhalinyaro ah si ay ula jaan qaadaan siyaasad ahaan.
In kabadan laba milyan ayaa uu dhigay dagaalkani guryo la'aan.
Si looga gudbo dhibaatada, dadka u dhaqdhaqaaqa iyo diblomaasiyiinta waxay soo alifeen ereyo cusub si ay u sharxaan qaababka xadgudubyada loo geysto.Markay Yugoslavia kala go'day horaantii 1990 meeyadii, ereyga "isir sifeyn" ayaa la sameeyay.
Tan laguma qeexin sharciga - ficillada sida dilalka qorshaysan iyo kufsiga iyo barakicinta qasabka ah ee ka kooban isir sifeynta kama duwana ficillada noqon kara xasuuqa.Warbixin ka soo baxday waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa lagu sheegay "isir sifeyn" ka dhacday galbeedka Tigray horaantii sanadkan.
Carruurtu waxay la kulmaan halista ah inay noloshooda inteeda kale ku qaataan qaxooti ahaan
Toban sano ka dib dagaalkii Yugoslavia, ergeygii hore ee gaarka ahaa ee Mareykanka ee danbiyada dagaalka, David Scheffer, wuxuu soo saaray ereyga "dambiyo gumaad" si uu isugu dayo inuu u soo gaabiyo waxa uu u arko doodaha sharci ee aan miro dhalka laheyn ee loo tiriyay xasuuq.
Doodaha kale ee ku saabsan 'xasuuq'
Daarfuur, doodda ku saabsan in xasuuqyo ay ahaayeen iyo in kale ayaa noqotay dood ballaran oo aad loogu kala aragti duwanaa.
Magacaabista Mareykanka ee "xasuuqa" waxay ahayd mid astaan u ah, markii guddiga Qaramada Midoobay ee baaritaanka ee Daarfuur ay joojiyeen inay ugu yeeraan xasuuq.
Kumannaan ku sugan Darfur ayaa weli sugaya caddaalad
Xeer ilaaliyaha maxkamada ICC ayaa markii dambe soo saaray waaran qabasho ah oo ka dhan ah madaxweyne Cumar Al-Bashiir, oo ay ku jirtay eedeymo xasuuq. Al-Bashiir waxaa xabsiga u taxaabay mas'uuliyiinta Suudaan laba sano ka hor hadda oo ahayd markii la afgembiyay, laakiin wali lama geyn ICC.
Maxkamadeynta horjooge maleeshiyo ah, Ali Abdel Rahman "Kushayb" ayaa laga furay 24-kii May maxkamada ICC 31 dacwadood oo ka dhan ah bini'aadanimada iyo dambiyada dagaalka - laakiin ma ahan xasuuq, taas oo qareenada ay tuhmayaan inay aad u adagtahay in la cadeeyo.
Haddii Bashiir uu wajaho maxkamad ICC, dacwad oogayaasha sidoo kale waa inay miisaamaan inay sii wadaan dacwadaha xasuuqa.
Saraakiisha sarsare ee maanta ku sugan Washington DC waxaa ku jira halyeeyo ka soo qeyb galay doodaha burburka ka socday Yugoslavia ilaa Darfur.Dhageysiga khamiista ee guddiga xiriirka dibada ee Senate-ka Mareykanka, Tigray waxaa lala barbardhigay Darfur.
Sarkaal katirsan waaxda arimaha dibada ayaa sheegay inay ka fiirsanayaan cunaqabatayn dhaqaale oo lagu soo rogo saraakiisha Itoobiya ee sida la sheegay masuul ka ah inay ku guuldareysteen inay joojiyaan gabood falka ka socda Tigray.
Waaxda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegtay in koox sharci ah ay baadhayaan in xadgudubyadu ay ahaayeen dambiyo ka dhan ah aadanaha iyo in kale.
Laakiin waxaa jira rabitaan yar oo ah in laga fikiro inay xasuuq tahay iyo in kale, iyadoo laga cabsi qabo inay sii huriso shucuur caqabad ku noqonaysa, oo aan fududeynaynin xalka